‘जय भोले’ को छायाँकन कसरी ३ सातामै सकियो ? « Ramailo छ
‘जय भोले’ को छायाँकन कसरी ३ सातामै सकियो ?
समय : 4:41 pm
फिल्म ‘जय भोले’ को छायाँकन तीन सातामै सकिएको छ । ईलाम र विर्तामोड आसपास क्षेत्रमा २१ दिनमै छायाँकन सकेर टिम राजधानी फर्किएको छ ।
तोकिएको समय भन्दा निकै अगाडी फिल्मको छायाँकन सम्पन्न भएको निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले बताएका छन् । फाल्गुन १ गते बाट फिल्मको छायाँकन सुरु गरिएको थियो । फिल्म युनिटले मौसमको साथ पायो । मौसमको बाधा भएन । कलाकार पनि पर्फेक्ट परे, चाँडो छायाँकन सक्नुको कारण बारे निर्माता तथा निर्देशक शर्माले भनेका छन् । उसो त फिल्ममा गीत र लामा द्धन्द्धका दृश्य छैनन् । त्यसैले पनि फिल्मको छायाँकन सोचे भन्दा छिटो सकिएको हो । स्वस्तिमासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
‘जय भोले’ मा खगेन्द्र लामिछाने, सौगात मल्ल, बुद्धी तामाङ, स्वस्तिमा खड्का, राजाराज पौडेल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । शर्माले आफ्नो फिल्मलाई आउँदो दशैंमा ‘छक्का पञ्जा ३’ सँगै लगाउने घोषणा गरेका छन् । फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् ।